site ha na 18-05-29
Stepper moto akara bụ a na ngwaọrụ na akara ahụ ọnọdụ, ọsọ na torque nke a n'ibu drive. Ọ e mere maka ngagharị akara nke electric Motors. Ọ nwere akpaka nnyefe na ntuziaka maka malite na ịkwụsị engine, na nhọrọ na ukpụhọde nke ọsọ. Ọzọkwa na-atụ anya ka se ...
Stepper Motors ndị na-emekarị nke microprocessors ma ọ bụ omenala njikwa ICS, na ike a na-achịkwa na sekit na sekit udo stepper moto ọkwọ ụgbọ ala na ike transistors. Kpọmkwem ije bụ ekwe omume, ma mgbagwoju abụkarị ala stepper amu amu na "ma eleghị anya, otu ụbọchị" biini akụkụ. Ma stepper ...
Stepper moto Nkea na obere nzọụkwụ na-adịkarị gosiri na labelụ na degrees. A nzọụkwụ moto na akpa ogho na one direction nke ugbu a na-gabiga a eriri igwe, mgbe ahụ, ọzọ, mgbe ahụ, ke akpa asọfe nke abụghị polarity, mgbe ahụ, nke abụọ na reverse polarity, nakwa. Nke a usoro na-ugboro ugboro n'ihi na c ...